Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyo Kala Duwan oo Ciidanka Gumaysigu Ay Kagaysteen Ogadenya.
Tacadiyo Kala Duwan oo Ciidanka Gumaysigu Ay Kagaysteen Ogadenya.
Posted by ONA Admin	/ January 30, 2016
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan ooy ciidanka Wayaanuhu ugaysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan wadanka Ogadenia. Tacadiyadan oo isugu jira xidhay, jidh-dil,
dhaawac iyo dhac ayaa laga soo sheegayaa meelo kala duwan oo wadanka kamid ah.
Warku wuxuu shegayaa in markay taariikhdu ahayd 24/1/2016 degmada Marsin oo Gobolka Qoraxay katirsan waxay ciidamada gumaysigu xidhay ugu gaysteen odayaal aad ubadan oo kuwa deegaanka ah. Xidhaygan ayaa ka dambeeyay kadib markay odayaashu diideen amar ahaa inay
keenaan ciidan daba qoodhi ah iyo lacagtii lagu biili lahaa ciidankaa waxaana helay magacyadooda Odayaasha kala ah.
1 deeq maxamad giir’adag
2 xiis yuusuf khaliif
3 xuseen maxamad cali
4 cabdi axmad barkhadle.
Sidoo kale Isniintii laso daafay taariikhduna ku aadanayd 25/1/2016 deegaanka Goomaar oo Dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay katirsan waxay ciidanka cadawgu ku xidheen nin shacab ah oo lagu magacaabo Cabdi Axmad Birdiid. Isla taariikhdan 25/1/2016 meesha lagu magacaabo Kuuscowl oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan waxay ciidanka gumaysigu xidhay wadareed iyo moora duug isugu dareen ninka lagu magacaabo Aadan Maxamuud oo laga dhacay dhamaan wuxuu geel iyo adhi lahaa sidookale waxaa laxidhay dhamaan dadkiisii.
Warkan ayaa intaasi raacinaya in markay taariikhdu ahayd 26/1/2016 Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob waxay ciidanka akhlaaqda daran ee Hawaarintu toogasho ku dhaawaceen labo nin oo shacab ah oo lagu kala magacaabo Sayid Xaaji Cabdulaahi Cali iyo muwaadin kaloo magaciisa lagu soo koobay Ina Xassan oo magiciisa oo buuxa aanaan haynin.
Dhinaca kale wuxuu warkan tibaaxayaa in Khamiistii taariikhduna ahayd 27/1/2016 Ceelka Hadhaawe oo Dagmada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle katirsan ay ciidanka gumaysigu ku dhaceen 40 geel ah oo hilbo ah loona waday dhinaca galbeed ee wadanka si loosoo gado waxaana meel banaan ladiray dadkii geelaas lahaa iyagoo waliba gacan kugabad ah.